RW Cumar oo sheegay in dowladda Soomaliya la wareegeyso qarashka shirka Dhuusa Mareeb – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ra’iisul wasaaraha Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud ayaa waxaa uu balan qaaday in Dowladda ay bixineyso qarashka ku baxaya Shirarka dib-u-heshiisiinta beelaha ee Goboladaas ka socda.
RW Cumar C/rashiid oo shalay tegay Dhuusamareeb oo xalay la kulmay maamulka gobolka Galgaduud iyo odayaasha ka qeybgelaya shirka dib u heshiisiinta ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda ay taabo gelineyso dhameystirka shirka dib-u-heshiisiinta, isagoo intii soo agaasinta uga Mahadceliyay qabsoomidda shirka.
Guddoomiyaha Gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wehliye Cirfo oo ka hadlayay kulanka ayaa ka warbixiyey degmooyinka weli ka maqan gacanta maamulka.
Cirfo ayaa sheegay in degmooyinka Ceeldheer iyo Galhareeri ay ka maqanyihiin gacanta dowladda, waxaana uu xusay in gobolka ay ka dhaceen faldambiyeedyo ay gacan ka geysteen Al-Shabaab, sida uu yiri.
Wasiirka Arrimaha gudaha, Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa ayaa sheegay in shirka dib-u-heshiisiinta uu gacan ka geysan doono dhismaha Maamulka Gobollada Mudug iyo Galgaduud.
“Dad wada heshiiyay ayaa nidaam sameysta, marka waxaan bulshada ka codsanayaa inay xoojiyaan dadaalka ku aadan sidii loo xalin lahaa, isla markaana dib-u-heshiisiin dhab ah loo dhex dhigi lahaa bulshada degta Gobollada Mudug iyo Galgaduud” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha gudaha.